ब्ल्याक होल (Black Hole) भनेको के हो र यसले कसरी असर गर्दछ ?
मे 25, 2019 मे 25, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments आइन्स्टाइन, जोन ह्वीलर, ब्ल्याक होल
ब्रम्हाण्डको चमत्कारपूर्ण गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको अन्धकारमय अदृश्य भागलाई नै ब्ल्याक होल भनिन्छ । यसले जुनसुकै वस्तुलाई पनि कुनै अस्तित्व बाँकी नराखी बेपत्ता पारिदिन सक्छ । ब्ल्याक होलका बारेमा सर्वप्रथम १८ औँ शताब्दीतिर चर्चा उठाइएको थियो । तथापि वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले यसबारे पुनः अनुसन्धान गरेपछि वैज्ञानिक समुदायमा ठूलो कौतुहलता आयो । सन् १९६७ मा आएर भौतिकशास्त्री जोन ह्वीलरले यस बारेमा नयाँ जानकारी प्रकाशमा ल्याए । उनको भनाई अनुसार यसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति यति भयानक हुन्छ कि यसले कुनै पनि वस्तु मात्र हैन प्रकाशलाई समेत सजिलै निल्न सक्छ ।
के हो ब्ल्याक होल (Black Hole) ?
वैज्ञानिकले गरे चमत्कार, इतिहासमा पहिलो पटक ब्लाक होलको तस्वीर सार्वजनिक
हालै प्रकाशमा आएको विवरण अनुसार हब्बल अन्तरिक्ष टेलिस्कोप मार्फत करीब पाँच करोड प्रकाश वर्ष टाढा ‘एम ८७’ नामको तारापुञ्जका केन्द्रबिन्दुमा केही अनौठो वस्तु देखिएको छ । सूर्यजत्रा करीब दुई अरब भन्दा बढी ताराहरुलाई हाम्रो सौर्य मण्डल जत्रो भागमा कोच्दा जति भार हुन्छ त्यति नै भार त्यसको भएको अनुमान गरिएको छ । वैज्ञानिकहरुको अनुमानमा त्यही नै विशाल ब्ल्याक होल हो । वैज्ञानिकले देखेको त्यो वस्तु वरीपरी घुमिरहेको ग्यासको बादल मात्र हो । त्यो बादल बाटुलो आकारको छ र १९ लाख किलो मिटर प्रतिघण्टाका दरले घुमिरहेको छ । त्यही बादलको घेरामा ब्ल्याक होल रहेको अनुमान गरिएको छ । यसले आफू वरपर आउने कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्तिले तान्ने र वस्तुलाई आफूभित्र हुत्याएर बेतोडले गुमाएर दृश्य जगतबाट बेपत्ता पार्दछ ।
वैज्ञानिकहरुले ब्ल्याक होलको उत्पत्ति कुनै एउटा शक्तिशाली विशाल ताराको विष्फोटनबाट भएको अनुमान गरेका छन् । त्यस ताराको सबै आणविक ऊर्जा जलेर नष्ट भएका हुनुपर्छ र त्यसपछि सम्पूर्ण तारा नै निकै सानो आकारमा संकुचित भएर घनत्व र गुरुत्वाकर्षण शक्तिमा अति वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन् । ब्ल्याक होल ब्रम्हाण्डको १५ अरब वर्षको इतिहासदेखि अनगिन्ती ताराहरुलाई आफूमा समाहित गर्दै शक्तिशाली र चमत्कारपूर्ण प्वाल बन्दै गइरहेको छ । अन्ततः वैज्ञानिकहरुले इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली समय अनुसार २०७५ साल चैत्र २७ गते साँझ ६ बजेर ४५ मिनेटमा ब्ल्याक होल (कृष्ण छिद्र) को तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् ।
← कुहिरो कसरी र किन लाग्छ ?
निगुरो खानुका फाइदाहरु →